Shirweyne nabadeed ee haweenka Somaliya oo ka furmay Garowe. – Radio Daljir
Oktoobar 25, 2010 12:00 b 0
Garowe, Oct 25 – Shirweyne nabadeed ayaa uga furmay Garowe, caasimada Puntland haweenka Somaliyed oo ka kala yimid badi gobollada Somaliya, wadamada Waqooyiga America, Europe iyo Afrika.
Madax ka tirsan golayaasha dawlada Puntland, ururada haweenka ee gobollada Somaliya, iyo mas’uuliyiin ka tirsan hay’adaha QM ayaa ka soo qayb galay furitaanka shirweynaha.
Madax ka tirsan golayaasha dawlada Puntland, haween ka kala yimid gobollada Somaliya sida Puntland, Somaliland, koonfurta Somaliya, Jibuuti, Ethiopia, iyo qurbaha ayaa khudbado iyo maansooyin kala duwan oo ku saabsan ahmiyadda iyo doorka haweenka ee horumarinta bulshada, nabadda, iyo dhaqaalaha Somaliya ka soo jeediyey shirweynaha oo socon doona muddo 3 cisho ah (25-ka Oktoobar illaa 27-ka Oktoobar).
Wasiirka haweenka & arrimaha qoyska ee Puntland Marwo Caasha Geelle Diiriye oo furtiaanka shirwqeynaha soo dhawaysay ka-qayb galayaasha shirka ayaa xustay ujeedada guud ee shirweynaha nabadeed ee haweenka Somaliya.
Marwo Caasha waxaa ay sheegtay in ahmiyadda 1-aad ee shirweynuhu ay tahay:
i) Ku bararaarujin haweenka Somaliyed kaalinta ay ku leeyihiin nabadda iyo ka hor taga colaadda, iyo is-faham ay yeeshaan dhexdooda,
ii) Ku baraarujin haweenka Somaliyed in siyaasad ama dawlad kasta ha ka mid ahaadeene in ay jiraan wax ka dhexeeya, una baahan in haweenku ay garawsadaan waxa kulmiya si waara oo wadajir ah loo helo.
M/weynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole oo furtiaanka shirka ka hadlay ayaa isna sheegay in dumarku ay yihin halbawlaha qoyska, ummadda, ayna kaalin mudan ka qaataan horumarka bulshada, ayna yihiin saldhigga buslheed ee ummadda. Waxaa uu xusay in loo baahan yahay in sare loo qaado waxbarashada gabdhaha, lana sharfo kaalinta haweenka ee arrimaha nabadda, siyaasad, dhaqaalaha iyo horunarka guud ee bulshada.
Waa shirkweynihii ugu horeeyey ee noociisa ah oo lagu qabto gobollada Puntland.
Wasaarada haweenka & arrimaha qoyska ee Puntland ayaa lahayd agaasimka iyo qabanqaabada shirweynaha, waxaana gacan ka gaysatay hay’ada UNDP.
18 dhakhtar oo u dhashay Turkey oo hawlo caafimaad ka bilaabay cisbitaalka guud ee Galkacyo; Dr. Warsame oo tafaasiil ka bixiyey.